Debian 11 Bullseye apinda Hard Freeze. Hakuchina shanduko huru | Linux Vakapindwa muropa
Kunge chero imwe software kana inoshanda sisitimu, yega vhezheni yeDebian yanga iri mukusimudzira kwemwedzi. Kana zvese zvave kuda kugadzirira, chirongwa ichi chinoisa system muSoft Freeze, inova inochinja-chinja basa kuita chando. Pasina kuchinjika ndiyo Yakaomarara Freeze uko yatopinda kare Debian 11: Kubva ikozvino zvichienda mberi, hakuzove nekuchinja kukuru, kana zvimwe zvakanyanya, hauchakwanise kuchinja chero chinhu mumakiyi mapakeji.
Bullseye, inova ndiyo nzira ichadaidzwa iyo vhezheni inotevera, ichaburitswa muna 2021, asi haisati yave nezuva rakarongwa. Debian inoburitsa software yayo chete kana iine chokwadi chekuti zvese zviri kushanda nemazvo, zvakasiyana nemwanakomana wayo ane mukurumbira, Ubuntu, uyo watinoziva kwemwedzi achaburitsa vhezheni yayo nyowani musi waApril 22. Muchokwadi, iyo Debian 11's Yakazara Kufreeze ichiripo rinoratidzika seTBA (Kuzoziviswa, kuziviswa).
Debian 11 iri kuuya pakati-2021
Kana zviri zvemashoko makuru, sezvo Debian iripo nematafura akasiyana uye yega yega inosanganisira software yayo, zvishoma zvinosimbiswa. Hongu inofanirwa kushandisa Linux 5.10 sekernari, sezvo iri yazvino vhezheni yeLTS yekernel. Yakave ichizivikanwawo kwemavhiki chii chichava Wallpaper rako, inova ndiyo yauri kutungamira kuchinyorwa chino.
Zvese zvimwe zvinhu, zvinotarisirwa kusanganisira zvakagadziridzwa mapakeji, senge "matsva" shanduro dzeFirefox nehofisi software. Kana isu tikaisa makotesheni imo nekuti Debian ndeye yakasimba system, uye ine chikwereti chikamu chekugadzikana kwayo kusagadzirise zvinhu zvakanyanya kana kushanduro nyowani seBuntu. Uye zvakare, iyo itsva ISOs ichasanganisira ese ekuchengetedzeka ematehwe ayo atove kuwanikwa muDebian 10, kusanganisira akati wandei eSudo, mumwe wemitemo yakakosha muLinux nyika (uye kwete chete Linux).
Kana iwe uchifarira kuyedza Debian 11, unogona kuitora kubva Iyi link, asi isu tinokurudzira kuti uzviite muPamoyo Session kana muchina chaiwo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Debian 11 Bullseye apinda Hard Freeze. Shanduko huru hadzisisina kutsigirwa
Iyo Nooooo pesaos, iyo Nooooo, kuti haizoshandisa kernel 5.10 kunyangwe zviine malts zvakadii. Iwe hauna zano nezve debian uye unoramba uchitaura zvisina basa. Iwe unoshandisa 5.4. Debian haisi kuzosvetuka, hapana chakaderera pane kubva pa4.19 kusvika pa5.10, izvo zvingave zvakaitika. Iyo 5.10 ichave lts asi zvinotora mazuva mana uye iyo 4 inovawo lts, ​​inopfuura kuratidzwa uye ndiyo iyo iyo debian ichazoshandisa nekuti ndiyo uzivi hwayo. Ichokwadi chinonyadzisa chaicho, kuve blog yeLinux, uchiramba uchitsikisa aya mabhuru.
Pindura kuna Nooooo
Ini handizive kuti kernel ichave nei, apa inoti 5.10:
Chandisinganzwisise ndechekuti nei makomendi nekutuka achibvumidzwa kuti vashande uye vangoita zvese kune vapepeti nevamwe vashandisi vanotaura. Izvo hazvifadzi uye zvinokukoka iwe kuti urege kuverenga iyi blog. Yakadzimwa uye yakarambidzwa, yemahara kutaura haina chekuita nekunyadziswa.
Ndakaverengawo mune dzakasiyana midhiya, maforamu, Reddit, nezvimwe, kuti zvinotora 5.10, asi haina kuchengetedzeka, ndosaka ndaisa "zvinofungidzirwa".
Nezve kubvisa, isu tinoedza kuzvidzivirira uye ndinofunga kuti chirevo chauri kunongedzera hachisi chakakomba. Dai zvaive, zvaizobviswa. Uye kune vamwe vashandisi, chimwe chinhu chandisingaone kana zvakafanana zvichaitika. Kana iri yakaoma, vanobviswa.
1. tr. Kugumbura mumwe munhu nekumudenha nekumutsamwisa nemashoko kana nezviito.
"Heavy, unonyara, usarege kutaura zvisina basa nekutsikisa zvisina basa."
Murume ... kana nekutuka isu tichireva chete kutuka mazwi uye pasina kukodzera, saka hongu, hazvigumbure kana kutsamwisa, kwete vamwe vaverengi. Iyo ndiyo nzira yakanakisa yekutenda nenguva yako. Kana, pamusoro pezvo, iko kuita kunobva pakubvisa iyo isina kugadzikana data uye ichipa zero ...
Ndakaona zvakataurwa muDesdelinux.
Asi zvinonyorerwa ini uye ini handina kugumbuka. Kana vakandigumbura kana ndikavabvisa, iko kubaya, asi handizvo. Ini handioni chikonzero chekudzima chirevo ichocho.
Tinokukwazisai kuPablinux nekuda kweichi chakanakisa posvo uye zvakare neichi chinzvimbo chakakura pamberi peakadzingwa makomendi.
SuperTux inosvika kuOpenStore yeUbuntu Kubata iyo inotanga kuora moyo